Okuhle futhi pessimists - bona bahlukene ezimbili: umuntu abheke emhlabeni ithemba, ophilayo ukholo Ngokuzayo nezincane ubunzima akusona isizathu ukuqinisekisa ukuthi buhlungu, selingene shí ehlaselwe ukucindezeleka ngaye. Abanye ngokuphambene uyakwazi ukuba akhathazeke ngoba inkathazo kancane, uthi akukho okuhle futhi ngeke ube naso, futhi ithambekele ukuzibona njengoba umuntu okholelwa entweni ekhona okwangempela.
Isimo sengqondo engenathemba sengqondo ngokuphila lukhuni kubantfu labanyenti kanye ngokuvamile kubangelwa ukwehluleka njalo, ukucindezeleka kanye nesimo njalo ecindezelekile. Umuntu Ufika esetshenziswa kwemizwa silahle ithemba, ngisho nalapho lokhu akukhona izizathu inhloso, esibizwa ngokuthi i-pessimist. Ake sibone, ukuthi balahle kulesi simo futhi ube nombono omuhle ngezinto onamileyo.
"Indlela ukuba nombono omuhle, uma kukhona izinkinga eziningi kangaka, izibonelo ukuhlupheka futhi ayikho indlela ukukulungisa?" - uthi iyiphi pessimist. Kodwa kuxhomeke kumuntu: ukulungisa izinkinga zabanye, awusebenzi ngaso sonke isikhathi nethuba, kodwa ukwenza kanjalo ukuthuthukisa isikhundla sabo - amandla kuwo wonke umuntu. Ukuthatha isikhundla ukuthi umuntu - umdali ikusasa lakhe, kanti icala wenza namuhla, kusasa uthela izithelo, futhi ngakho kufanele sizame ukuba lula ikusasa labo manje. Impumelelo kwenza abantu ukuthi ayemakhulu amathemba ababenawo, ngakho kudingeka imizwilili nawe ukunqoba futhi ngenza konke okusemandleni ukuze siyifinyelele.
pessimists Abaningi abazi ngisho ukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuba ngibe nethemba lokuhle, ngoba bacabanga abokugcina, ababuka izwe 'izibuko rose klebhu ", singakunaki kanjani izenzakalo eziningi ngeshwa bube khona ngenxa yokuthatha iphutha labo.
Ukuzibeka icala noma ukusola abanye ukwehluleka kwabo - ngesinye isici pessimist, kusukela ofuna ukuqeda. Lapho kufanelekile sikhundla: 'yebo, ngibé namuhla imbangela yokwehluleka kwakhe, kodwa kusasa ngizo- "Yini eyayibangele lokho' eletha impumelelo yakhe". Thatha isinyathelo kuqala ezandleni zabo - into ezokwenza indoda ka pessimist onamileyo.
Ngokuqinisekile eziningi pessimists, abake baba abantu ukuthi ayemakhulu amathemba ababenawo unesithakazelo nendlela yokuba nombono omuhle uma emhlabeni abanye uthanda. Imvelo kunethonya elikhulu kumuntu, futhi ephuza ingaholela ngisho nasekukholelweni ukuthi ukushintsha umbono. Uma emhlabeni abangane pessimists ke kunezindlela ezintathu kuzo isimo yilezi:
Hhayi okungcono - yiya ku kude.
Okuningi eyamukelekayo - ukwandisa indilinga labangane, ubuyise ezinhlwini zabo nabantu isimo sengqondo esiqondile.
The best - ukwenza abangane pessimists lokuhle.
Uma umuntu unesithakazelo umculo, baxoxelane ecindezelekile, futhi njalo ukulalela iculo ngokuphila kanjani lento yayibuhlungu ke, yebo, imicabango yakhe uyogeleza ukuthi emthanjeni. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba abe umuntu onethemba lokuhle, udinga ukuqala ukuba bangayeki ukulalela izingoma ezincane futhi uye "C".
Ukusebenzisa trainings "imfashini"
Manje ethandwa kakhulu amasu ngeso lapho izazi zokusebenza kwengqondo zithi nemicabango impahla , ngakho badinga kuphela ukuba ngicabange ngendlela eyakhayo. Kulabo abafuna ukwazi ukuthi angaba kanjani nombono omuhle, eziwusizo kakhulu ngeke lezi zifundo: Cabanga kahle - kuyikhono ukuthi kumele afunde.
I smile ngeke kukhanye zonke
Okuhle ngokuvamile smiling, hhayi ngoba zonke kamnandi kangaka empilweni, kodwa ngoba bakholelwa ku ezinhle futhi balinde ukuqala Ngokuzayo ngomdlandla ilukuluku. Pessimists ulesabe ikusasa, kanye emomotheka yabo ivelakancane (ngaphandle inkulumo).
Ososayensi baye bafakazela ukuthi uma umuntu uyamamatheka imicabango yakhe emihle, futhi isimo liphuma khona. Ngakho-ke, i-pessimists kudingeka smile kaningi, kuqala push wena ukwakha ukumamatheka ngamabomu, wabe cishe ziyothambekela kakhudlwana avele ebusweni ngaphandle nokuphoqwa bayazi.
Ngakho, ukuze ube nombono omuhle, akudingekile ukusebenzisa super-anele kancane kuphela ulungise ukuziphatha kwabo.
I-Lotus nut-bearing: incazelo ngesithombe
Amapaki ePapaloni: ukubuyekezwa
Iyini isilondolozi? Isilondolozi kusiphequluli kungani udinga ukuhlanza?